Raha lasa tampoka irery, ny olana dia ny mba hahita ny olona na tsy te-hiresaka amin’ny namanao, dia mety ho tianao ny hanandrana an-tserasera anonymous chat room. Ao ireo chat room misy hatrany ny olona, ny sasany Ianao na dia tsy manana hevitra izay miresaka ianao.
Tao anatin’ny taona vitsivitsy, ireo internet no tsara tarehy be nisara-panambadiana.
Mieritreritra aho fa ny voalohany sy ny malaza indrindra amin’izy ireo Chat roulette. Fa bebe kokoa ny lahatsary amin’ny chat, na dia hiresaka tsy misy fakan-tsary tsy misy loatra. Niantoraka anao ny vono-olona, ary raha toa ka tianao izany, masìna ianao, na inona na inona mba hanoratra. Raha tsy izany, rehefa afaka segondra vitsivitsy Ianao indray mitete ho loharano hafa. Misy naorina ao amin’ny tonian-dahatsoratra sary mba hifandraisana, tsy azo, tsy manonta taratasy fa koa ny sary.
Miaraka amin’ny fomba fijery ny mpihaino, dia tena be dia be, ka ho feno ny mampiasa izany fanompoana izany ianao dia tsy maintsy ho iray, fara fahakeliny, fahalalana kely ny teny anglisy. Na izany aza, dia afaka mampiasa ny malagasy, ny Lahatsary amin’ny chat miaraka amin’ny ankamaroan’ny rosiana-miteny amin’ny mpihaino.
Miresaka ahy hiresaka tsy misy fisoratana anarana, rehetra tokony atao dia araho ny rohy ary tsindrio eo amin’ny bokotra iray ary manana ny loharanom-baovao. Na inona na inona mihoatra, fotsiny ny fifandraisana. Tamin’izany fotoana izany ny ahy nanoratra ity lahatsoratra ity dia nisy mpampiasa aterineto.
«An-tserasera ny fifandraisana», ao amin’ny fitsipika tena mitovy amin’ny teo aloha, afa-tsy ny loko famolavolana sy ny mety ho ny toe-javatra. Rehefa tonga izany dia mihoatra ny arivo mpampiasa.
Ary farany Mampiaraka. Tsy mitonona anarana amin’ny chat miaraka amin’ny fahafahana mifidy ny olona nanontaniana tamin’ny alalan’ny firaisana ara-nofo sy ny taona.
Misy mampihomehy sata izay mampiseho ny toe-po
Hiditra tsy maintsy mamaritra ny anaram-bositra ary mifidiana izay te-hiresaka. Amin’ny fipihana ny bokotra»Manomboka amin’ny chat»mbola Tsy maintsy misoratra anarana.
Faly fa misy Dog, fa mbola toerana tena.
Ny zava-drehetra toa lehibe, fa ny olona ho hadihadiana maintsy miandry ela.
Ary avy eo dia ny sasany tsy
← Fifandraisana amin'ny alalan'ny Internet
Ny fomba mandefa hafatra an-tsoratra ny teny Sinoa ankizivavy izay tia ny tenany avy any Azia fitiavana toerana →